२७ लाख रुपैयामा निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकी, मनमा जे लाग्छ २–४ शब्द प्रतिक्रिया जनाउँनुहोला – live 60media
खोटाङ । खोटाङ जिल्ला साकेला गाउँपालिका–४ मा २७ लाख रुपैयामा निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकी हो यो । तस्विर देख्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ । अहिले सबै पालिकामा निर्माण गर्न लागिएका सबै स्वास्थ्य चौकी यस्तै हुन् सरकार ? यहाँ काठ, ढुंगा–मोटो, जस्ता, केही मात्रामा सिमेण्ट र बालुवा बाहेक अरु केही प्रयोग भएको छैन । कसको दृष्टीले यति खर्च लाग्यो होला भन्छ ? बाँकी विवरण खोजी हुँदैछ । खर्च जग्गा बाहेक हो नी, निर्माण गर्न मात्र । नियालेर हेर्नुहोला । मनमा जे लाग्छ २–४ शब्द प्रतिक्रिया जनाउँनुहोला ।
छोरी जेनिसाको केही समय अगाडि पत्थरीको अप्रेसन गरिएको थियो । तर अप्रेसन गरेको ठाउँमा इन्फेक्सन भएर थप उपचार गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि घर परिवारमा सल्लाह गरेर काठमाडौं जाने निधो गर्यौं । हिजो साँझ लु.१ च. ९७३१ नम्बरको जिपमा म, छोरी जेनिसा र श्रीमती जमुना काठमाडौंका लागि हिँड्यौँ । जिप चालक सूर्य केसी थिए ।यात्रा राम्रैसँग चलेको थियो । बिहानीपख निद्राले अलि झकाएको थिएँ । एक्कासी छोरी र श्रीमती चिच्याए । आँखा खोल्दा गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो र त्रिशुलीमा पुग्यो।
बग्दै गरेको गाडीको झ्याल ढोका खोल्ने प्रयास गरेँ । मैले अलिकति पानी पनि पिइसकेको थिएँ । अब सक्कियो भन्ने लागेको थियो । केही तल पुगेपछि संयोगले ढोका वा झ्याल के खुल्यो । म बाहिर निस्किएँ । तर, ड्राइभर, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन ।पौडी खेलेर नदी पार गरेँ । मैले गुहार माग्न चिच्याए । तर कसैले सुनेन । मुस्किलले राजमार्गमा आएँ । काठमाडौंबाट आउँदै गरेको ट्रकलाई रोकेर घटनाबारे बताएँ । ट्रक ड्राइभरले प्रहरीलाई खबर गरे। मुग्लिनबाट प्रहरी टोली तुरुन्तै घटनास्थल पुग्यो ।त्यतिबेलासम्म मैले आफ्नो भिजेको लुगा खोलेर ट्रक ड्राभइभरको लुगा लगाएको थिएँ । प्रहरीले मलाई गाडीमा हालेर भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि ल्यायो।
← अबदेखि एक बैंकको एटीमएम कार्ड प्रयोग गरेर अर्को बैंकको एटीएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।
८ महिने गर्भवती महिलाको टाउको फो-डेर ३२ बर्षे युवा फ-रार(भिडियो) →